Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: varimbarian’ny adim-piainana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: varimbarian’ny adim-piainana
Tsy vaovao intsony ny fitombon’ny fahasahiranana. Tsy hita itarainana akory nefa manaitra hatrany ny fanatrehana izany isan’andro noho ny fahitana ny fisondrotry ny vidim-piainana tsy re tsaika nefa heno mitombo fangirifiriana hatrany. Ho an’ny ankamaroan’ny fianakaviana, tsy mbola misy tokontaniny izany fety izany.
Na efa tazany aza fa eo andaniny efa maro ireo mihetsiketsika manomana izany, mionona fotsiny amin’ny fiheverana fa samy manana ny anjara tandrify azy ireo tototry ny fahasahiranana. Samy mahatsapa daholo angamba ny rehetra ny mahazava-dehibe ny filana fanovana noho ny fahitana fa mirona hatrany any amin’izay tsy izy ny fandehan’ny toe-piainana eto an-toerana. Nefa moa toa izay fitomboan’ny fahasahiranana izay indray no maha-varimbariana tsy fidiny ka adinodino ny fanomezana vahana ny fandinihana an’ilay fifidianana izay hatrehana tsy ho ela. Na inona na inona anefa ny tsy fahampiana finoana mikasika ny fiovana afaka ho entin’ny vokatr’io fifidianana io dia tsy hitondra vahaolona koa ny famoizam-po amin’ny tsy fandraisana anjara ka dia izay tapaky ny sasany any no ho zakaina.
Olom-pirenena manana zo manokana ny tena sady manan-tsaina handinika hamolavola hevitra dia hionona tsy haneho izany ka tsy hanana anjara afa-tsy amin’ny fimenomenomana rehefa miseho ny ratsy. Fialana nenina hatrany angamba ny fifidianana nefa kosa mety hitondra fiovana rehefa tena tsapa ny tsy maha-mety. Eo amin’ny olona isafidianana, samy misy hatrany moa ny lafiratsiny sy lafitsarany. Indraindray, ny hany lafitsarany iray angamba dia ny mahavalin’ny lafiratsin’ny mpifaninana aminy. Andeha atao hoe sakana amin’ny fisehoan’ny ratsy no anton’ny safidy, efa fanefana adidy lehibe ny fanehoana an’izay. Tsy dia izay loatra angamba ny fisehon’ny raharaha amin’ity fihodinana indray mandeha ity. Samy manana ny mahaizy azy ireo roa lahy mpifaninana. Samy efa nitondra, samy efa nanana fotoana fiatoana nahafahany nandinika ny làlana tokony ho diavina mba tsy hiverenana amin’ny ratsy efa nizorana.
Araky ny vokatra tamin’ny fihodinana voalohany sy araky ny fiheveran’ny mpanara-maso sy mpandinika ny fizotran’ny raharaham-pirenena dia mifandanjalanja ny hery. Noho izany dia manan-danja lehibe ny safidin’ny mpifidy tsirairay. Arak’izany, adidy lehibe no miankina amin’ny isam-batan’ny olom-pirenena na vavy na lahy. Ny fihenoana ny zavatra lazain’ireo mpilatsaka sy ny fandinihana an’izany mba ahafahana mifidy an’izay heverina hitondra soa ho an’ny firenena no adidy na reraky ny fahasahiranana aza ny vatana sy ny saina ary mety hahavery fanahy mihitsy aza ny vesatry ny fiainana.